ढुक्क हुनुस्, हाम्रो विजय सुनिश्चित छ : डा त्रिरत्न बज्राचार्य-Setoghar
अध्यक्ष पदका उम्मेदवार, नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन (प्रगतिशिल समूह)
अहिले नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको चुनावी मैदानको संघारमा छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा अहिलेकाे निर्वाचन, अागामी कार्यदिशा, मुलुकमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रकाे विकासकाे निम्त एसाेसिएसनले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमीका, राज्यका नीतिहरू लगायतका विषयहरूमा केन्द्रीत रहेर हामीले नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन (प्रगतिशिल समूह)बाट अध्यक्ष पदकाे लागि उम्मेदवारी दिनुभएका प्रा.डा त्रिरत्न बज्राचार्यसँग कुराकानी गरेका थियाैं । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीकाे सम्पादित अंश ः
निर्वाचन नजिकिएको छ, यसको तयारी कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले हामी केन्द्रका सबै पदाधिकारीहरु उम्मेदवारहरुको परिचयात्मक कार्यक्रमलाई तीव्र पारेका छौं । हामीले नेपालमा भएका सबै इन्जिनियरहरुको हकहित र अधिकारको निम्ति काम गर्न नयाँ योजनाको साथ काम गर्न प्रतिवद्ध छौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एक ठूलो जनवर्गिय संगठनको हैसियतले हामीले प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर एसोसिएसन गठन गरिएको र हाम्रो सञ्जाल केन्द्रमा मात्र नभई नेपालका ७ ओटै प्रदेशमा फैलाएको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्ने आधार बलियो छ । अहिले हामी जहाँ पुग्छौं, त्यहाँबाट हामीले विशेष उत्साह प्राप्त गरेका छौं । हाम्रो अवस्था बलियो देखिएको छ । यसले गर्दा हामीलाई अघी बढ्न निकै सहज छ ।
अहिले नेपालमा इन्जिनियरिङ क्षेत्र समेत निकै नै विधागत समेत हुँदै गइरहेका छन् । यस क्षेत्रमा नयाँ खोज अनुसन्धान भइरहेको छ । यसमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको पनि महत्वपूर्ण भूमीका हुनुपथ्र्यो । तर त्यस अनुपातमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले भने काम गर्न सकेको छैन ।
अहिले नेपालका १ नम्बर देखि ७ नम्बर सम्म पुग्ने क्रममा हामीले हाम्रा बहुसङ्ख्यक सदस्यहरुको साथ पाएका छौं । हामी नेपालका इन्जिनियरहरुको हकहितको निम्ति विशेष योजना र कार्यदिशा लिएर चुनावी मैदानमा खटिएका छौं । यस्तो अवस्थामा नेपालमा अब हुन गइरहेको निर्वाचन हाम्रो लागि विशेष अवसर हुनेछ ।
प्रगतिशिल समूहको विजय हुने आधारहरु के–के छन् ?
हुनतः अहिले सम्मका नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनका अधिकांश निर्वाचनहरुमा प्रजातान्त्रिक समूहले विजय प्राप्त गर्दै आएको छ । तर हामीले केही पटक विजय प्राप्त गर्दा पनि विभिन्न रचनात्मक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न सकेको कारण प्रगतिशिल समूह प्रति धेरैको ठूलो अपेक्षा छ । यतिमात्र नभई हामीले २ बर्षमा गर्नुपर्ने र गर्न सकिने सबै कार्यहरु योजनावद्ध रुपमा पस्किएको र त्यसका आधारहरु समेत उल्लेख गरेको अवसरमा हामीले यस पटकको निर्वाचनमा हाम्रो विजय हुने सुनिश्चित नै छ ।
नेपालमा लामो समय लोकतान्त्रिक समूहले नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको नेतृत्व गरेको भएपनि नेपाली इन्जिनियरहरुको अपेक्षा बमोजिम काम हुन नसकेको तर त्यही समयमा थुप्रै रचनात्मक कामहरु सहित अघी बढेको र सबैको नेतृत्व गर्न सक्ने टीम अघी सरेको अवसरमा इन्जिनियर मित्रहरुले सही नेतृत्व लिन सक्ने टीमको रुपमा हामीलाई नै बहुमत प्रदान गर्नुहुनेमा हामी ढुक्क छौं ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् एसोसिएसनको तुलनामा निकै पछि मात्र स्थापना भएको संस्था भएपनि अहिले परिषद्मा करिब ४७ हजार सदस्यहरु रहेको देखिन्छ । तर नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको अघिल्लो पटक करिब २७ हजार देखिएका सदस्यहरु घटेर अहिले १७ हजारमा झरेकाछन् । जसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन साझा संस्था बन्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ ।
मैले लामो समय देखि नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षालाई नजिकबाट बुझेको छु । म नेपाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको डिनको रुपमा हाल सम्म पनि कार्यरत रहेको छु भने पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा प्रध्यापक समेत छु । त्रि.वि प्राध्यापक संघ, पुल्चोक इकाई समितिको अध्यक्षको भूमीकामा रहेर समेत काम गरेको लगायतका अनुभवहरु मैले समेटेको हुनाले म यस क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझेको, आम इन्जिनियरहरुसँग परिचित रहेको, इन्जिनियरिङ शिक्षालाई समयानुकुल बनाउन, देशीविदेशी संस्थाहरुसँग नजिक रही काम गर्ने अवसर पाएको, लगायतको लगायतको कारण मैले यस संस्थालाई राम्रो तवरले सञ्चालन गर्न सक्छु । यो कुरा सबै सदस्य इन्जिनियर मित्रहरुलाई जानकारी छ ।
मैले नेपालमा पनि निकै धेरै सङ्ख्यामा सक्षम इन्जिनियरिङ जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको र अब उक्त अनुभव नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन मार्फत नेपाली इन्जिनियरहरुकै हक, हित र अधिकारको निम्ति म उपयोग गर्न चाहेको कुरा सबैलाई थाहा छ । यसको अलावा मैले अन्य कुनै स्वार्थ पूर्ति गर्ने सोच लिएको छैन । मेरो सम्पूर्ण ध्यान नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको वृहत्तर हितमा नै केन्द्रित छ । यिनै आधारलाई हेर्दा मेरो समूहको जित सुनिश्चित छ ।
मुलुकको विकासमा इन्जिनियरको कस्तो भूमीका रहन्छ ?
कुनै पनि मुलुकको विकासको निम्ति इन्जिनियरको महत्वपूर्ण भूमीका रहने गर्छ । कुनै पनि ठाऊँ वा देशको विकासको निम्ति इन्जिनियरिङ क्षेत्र नै विकासको वाहक हो । अहिले हामी नेपालमा हवाइजहाज, रेलसेवा, पानीजहाज, उच्च क्षमतामा जलविद्युत उत्पादन लगायतका कामहरुको निम्ति योजनाहरु अघी बढाएका छौं । यी सबैजसो कामहरु इन्जिनियरिङ क्षेत्रसँग नै सम्बन्धित छन् । यी सबै कामको निम्ति इन्जिनियरहरु विशेष क्षमतावान् हुनु जरुरी रहन्छ ।
मुलुकमा प्रविधिको विकासमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको योगदान के हुन सक्छ ?
अहिले नेपालमा इन्जिनियरिङ क्षेत्र समेत निकै नै विधागत समेत हुँदै गइरहेका छन् । यस क्षेत्रमा नयाँ खोज अनुसन्धान भइरहेको छ । यसमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको पनि महत्वपूर्ण भूमीका हुनुपथ्र्यो । तर त्यस अनुपातमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले भने काम गर्न सकेको छैन । यो एसोसिएसन अहिले पनि पुरानो ढाँचाबाट नै चलिरहेको छ । नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने वि.सं २०१९ मा स्थापना भएको यस नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले अहिले सम्म पनि यस क्षेत्रको विकासको निम्ति जुन रुपमा काम गर्नुपर्ने थियो, त्यसको तुलनामा निकै कम मात्र काम भएको छ ।
यसपटक त निर्वाचनमा सहभागि सदस्यहरुको सङ्ख्या निकै कम छ नि, यस्तो अवस्था किन आयो त ?
नेपालका इन्जिनियर्स एसोसिएसनले प्रभावकारी तवरले काम गर्न नसक्दा नेपालमा अहिले इन्जिनियरहरुले राम्रो इज्जत र सम्मानको साथ काम गर्ने वातावरण समेत बन्न सकेको छैन । यसको प्रभाव स्वरुप नै भन्नुपर्छ, प्रत्येक बर्ष एसोसिएसनका सदस्य सङ्ख्या बढ्दै जानुपर्नेमा त्यसो हुन नसकी उल्टो यो सङ्ख्या घट्दै गइरहेको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् एसोसिएसनको तुलनामा निकै पछि मात्र स्थापना भएको संस्था भएपनि अहिले परिषद्मा करिब ४७ हजार सदस्यहरु रहेको देखिन्छ । तर नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको अघिल्लो पटक करिब २७ हजार देखिएका सदस्यहरु घटेर अहिले १७ हजारमा झरेकाछन् । जसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन साझा संस्था बन्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ ।
तपाईंले यस पटकको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदको लागि किन उम्मेदवारी दिनुभएको हो ?
मेरो यस क्षेत्रको लामो अनुभव र मेरो नेतृत्वका राम्रो छवि भएका इन्जिनियरहरुको साथमा अब नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनलाई साझा संस्था बनाउनको निम्ति पहल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले मैले यसपटकको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
तपाईं नेतृत्वको समूहका चुनावी एजेन्डाहरु के–के छन् ?
अहिलेको चुनावी एजेण्डाको रुपमा हामीले आम इन्जिनियरहरुको हक, हित र अधिकारको लागि काम गर्न ३२ बुँदे प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक समेत गरेका छौं । हामी एकातिर इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तरीयता वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित छौं भने अर्कोतिर यसलाई इन्जिनियरहरुको क्षमता विकास र गुणस्तरीयता कायम गर्ने कार्यको व्यावहारिक र कार्यगत विकासको लागि काम गर्नमा केन्द्रित छौं ।
हामीले लामो समय देखि इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापनाको लागि सरकारसँग माग समेत राख्दै आएको कुरा पनि प्रतिवद्धतामा समेटेका छौं । नेपालका युवा इन्जिनियरहरुले निकै मेहनतको साथ अध्ययन गरेर कार्यमा खटिएपनि प्राप्त गर्ने तलब निकै कम रहेकोमा यसलाई वृद्धिको लागि पहल गर्नेछौं । यसको लागि नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले रोजगारी प्रवद्र्धनको निम्ति समेत विशेष पहल गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
क्षमताका दृष्टिले नेपालका इन्जिनियरहरु कस्तो अवस्थामा छन् ?
वास्तवमा नेपालका इन्जिनियरहरु निकै सक्षम छन् । हामी नेपालमा मात्र नभई बाह्य मुलुकमा आवश्यक पर्ने इन्जिनियरहरु उपलब्ध गराउनको निम्ति समेत काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन तयार छौं । हामीले जापानको एउटा रिक्रुटमेन्ट कम्पनीसँग जापानका इन्जिनियर भन्दा नेपाली इन्जिनियरहरुलाई बढी तलबमा काम गर्न सक्ने वातावरण समेत तयार पारेका छौं । साथै अन्य क्षेत्र जसरी यस क्षेत्रमा पनि अधिकांशमा जागिर प्रतिको आकर्षण बढी छ । तर अब भने जागिर खोज्ने नभई इन्जिनियरहरुलाई जागिर सृजना गर्न सक्ने बनाउने किसिमले हामीले काम गर्नु जरुरी छ ।
तपाईंहरु निर्वाचित भएपश्चात् तत्काल कुन–कुन कामहरु अघी बढाउनुहुन्छ ?
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन सबै व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन हो । विभिन्न जोखिमपूर्ण कामहरु गर्नुपर्ने इन्जिनियरहरुको अहिले सम्म बीमा कार्यक्रम समेत लागु हुन नसकेको कारण थुप्रै इन्जिनियरहरुको परिवारमा बिचल्ली आउने गरेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने किसिमले सामुहिक विमा कार्यक्रम तत्काल पहिलो वैठकमा नै निर्णय गर्ने योजनामा छौं । अहिले ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ भन्ने नारा सहित नेपाल सरकार अघी बढेको अवस्थामा हामी पनि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्न समेत तयार छौं ।
चीन, दक्षिण कोरिया लगायतका जसरीे राम्रो तवरले विकास भएको छ, त्यसो हुनुमा राष्ट्रको नेतृत्व त्यहाँका इन्जिनियरहरुले लिनु नै मुख्य कुरा हो । कोरियामा पनि यस्तै अवस्था छ । समग्रमा भन्नुपर्दा आर्थिक रुपमा फड्को मारिरहेका देशहरुमा इन्जिनियरहरुले नै राष्ट्रको नेतृत्व लिएको पाइन्छ । अमेरिका पनि इन्जिनियरहरुले नै नेतृत्व लिएको कारण नै अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो ।
मुलुकमा भएका विकास कार्यहरुमा नेपाल सरकारका निकायहरु बीच आपसी समन्वय देखिँदैन । यो समस्या कसरी ठीक गर्न सकिन्छ ?
अहिले नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासको निम्ति काम भइरहेको छ । तर अहिले सम्म नेपाल सरकार अन्तरगतका निकायहरुले समेत आपसी समन्वयन बिना नै काम गरेको देखिएको छ । अब भने नेपालमा यी सबै निकायहरुलाई सहकार्य गर्नको निम्ति नेपालमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको समेत आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौं । जसले नेपाल सरकार अन्तरगतका सिँचाई, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार लगायतका सबै मन्त्रालय र अन्य सबै निकायहरु बीच आपसी समन्वय कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
तपाईंहरुका अन्य योजनाहरु के छन् ?
क. विदेशिएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन पहल ः
अहिले नेपालीहरुले युरोप, अष्ट्रेलिया लगायतमा निकै राम्रो तवरले काम गरिरहेका छन् । तर नेपालमा भने अहिले सम्म यसको निम्ति खासै काम हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा यदि नेपालीहरुलाई काम गर्नको निम्ति राम्रो वातावरण हुने हो भने विदेशिएका ठूलो सङ्ख्याका इन्जिनियरहरुलाई नेपालमा नै फर्काउन सकिन्छ ।
अहिलेका इन्जिनियरलाई प्राविधिक ज्ञान भएर मात्र पनि हुँदैन । व्यवस्थापन, नेतृत्वदायी क्षमता, आर्थिक उपार्जन, प्रभावकारी सञ्चार, नैतिक आचरण लगायतका कुराहरु समेत अहिलेको शैक्षिक कार्यक्रममा समेटिनुपर्छ ।
ख. नेतृत्व तहमा इन्जिनियरलाई ल्याउन पहल आवश्यक ः
हामीले सिंगापुरको विकासलाई हे¥यौं भने त्यहाँको विकास पूर्ण रुपमा मानवनिर्मित नै छ । प्राकृतिक रुपमा केही पनि उपलब्ध छैन । कृत्रिम माटोको प्रयोग गरेर नै सिंगापुरको विकास भएको छ । चीन, दक्षिण कोरिया लगायतका जसरीे राम्रो तवरले विकास भएको छ, त्यसो हुनुमा राष्ट्रको नेतृत्व त्यहाँका इन्जिनियरहरुले लिनु नै मुख्य कुरा हो । कोरियामा पनि यस्तै अवस्था छ । समग्रमा भन्नुपर्दा आर्थिक रुपमा फड्को मारिरहेका देशहरुमा इन्जिनियरहरुले नै राष्ट्रको नेतृत्व लिएको पाइन्छ । अमेरिका पनि इन्जिनियरहरुले नै नेतृत्व लिएको कारण नै अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो । यसरी नै नेपालमा पनि हामीले इन्जिनियरहरुलाई सामान्य काममा मात्र सीमित नराखी राम्रो योजनाकार, व्यवस्थापक लगायतका काममा लगाउन सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरणको रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नै लिन सकिन्छ । यसैगरी राष्ट्रय गौरवका आयोजनाहरु निर्माण गर्ने क्रममा पनि इन्जिनियरहरुलाई नै योजना तय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ र सोही बमोजिम कार्यान्वयनको लागि अवसर समेत दिनुपर्छ ।
अतः अब नेपालमा इन्जिनियर्स एसोसिएसन रचनात्मक कार्यमा लाग्नु जरुरी छ । यसको कार्यक्षमतामा निकै नै वृद्धि हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यपक्ष र व्यवसायीहरुबीच पुलको काम गर्दै हाम्रा गतिविधिहरु अघी बढाउन नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको महत्वपूर्ण भूमीका निर्वाह गर्न सक्छ ।
इन्जिनियरिङ शिक्षालाई अन्य व्यावहारिक विधाहरुसँग जोड्नु कत्तिको आवश्यक छ ?
वास्तवमा अहिलेका इन्जिनियरलाई प्राविधिक ज्ञान भएर मात्र पनि हुँदैन । व्यवस्थापन, नेतृत्वदायी क्षमता, आर्थिक उपार्जन, प्रभावकारी सञ्चार, नैतिक आचरण लगायतका कुराहरु समेत अहिलेको शैक्षिक कार्यक्रममा समेटिनुपर्छ ।
अन्त्यमा तपाईंले के भन्न चाहनुहुन्छ ?
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन सबै इन्जिनियरहरुको हकहितको लागि काम गर्ने संस्था हो । यसमा फुर्सदमा समय निकालेर नेतृत्व लिने सोच राखेर हुँदैन, पूर्ण काल नै खटिनुपर्छ । नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षा, रोजगार, हकअधिकार लगायतमा काम गर्नुपर्ने हुँदा आफू निर्वाचित भएपश्चात् कम्तीमा १ कार्यकाल पूर्ण रुपमा समर्पित भइ निरन्तर अघी बढ्नुपर्छ । म आफू निर्वाचित भएपश्चात् २ बर्षलाई विदा लिएर यही संस्थाको लागि काम गर्न तयार छु । साथै अहिले हामीले तय गरेका जुन कार्यक्रमहरु छन्, ती सबै हाम्रो कार्यकालमा नै पूरा गर्न सकिने किसिमका नै छन् । साथै अहिलेको निर्वाचनको प्रचारप्रसारको माहोल समेतलाई विचार गर्दा हाम्रो विजय सुनिश्चित छ ।